AMA-50 ABALASELEYO KWICOMB NGAPHEZULU KWEENWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Ukudibanisa ama-50 ngaphezulu kweenwele zabantu
Ikama ngaphezulu ngokulula yenye yeenwele ezipholileyo zamadoda ngeenxa zonke. Ikama malunga neenwele zibonelela ngohlobo oluqhelekileyo oluye lwavela ngokuhamba kwexesha lwaya kusiko lwala maxesha ...
Ikama ngaphezulu ngokulula yenye yeenwele ezipholileyo zamadoda ngeenxa zonke. Ikama malunga neenwele zibonelela ngesitayile esiqhelekileyo esiguquke ngokuhamba kwexesha saba kukunqunyulwa kwesiqhelo okujongeka kukhulu nangaluphi na uhlobo lweenwele, ubume okanye ubude. Isitayile nesidumileyo, ikama lamadoda ngaphezulu kokucheba iinwele liye laba kuyo yonke indawo, ngakumbi kwiindawo zokucheba iinwele kwihlabathi liphela. Ngelixa zininzi iintlobo ezahlukeneyo zeekom overs, kubandakanya icala elisecaleni, ikama ngaphezulu kwe-undercut, kunye Ikama liphele , Umxholo wokutshayela iinwele zakho kwicala uphelele phakathi kwabo bonke.
Ngethamsanqa, nokuba uthini uhlobo lweenwele zakho, imilo yobuso okanye ubudala, ikama ngaphezulu kwezitayile ziyabukeka kwaye kulula ukuzicela okanye ukuzenza. Ngezantsi, siza kuxubusha ikama elungileyo kunokunqunyulwa kweenwele, indlela yokusika kunye nokuyitayile, kunye nemizekelo yokubonakala ngeenwele ezimfutshane nezinde.
1Yintoni indibaniselwano yokucheba iinwele?
MbiniOwonaMdibaniso wamadoda uQhelekileyo weenwele
3.1OkuPhezulu okuPhezulu kunye nokuPhela okuPhezulu ngaphezulu
4I-Undercut Comb ngaphezulu
5Ikhefu elifutshane ngaphezulu
6Ikama ixesha elide
7Ikhefu eliDala ngaphezulu
8Uyenza njani indlela yokuChwetheza ukudibanisa ngaphezulu
8.1Uyenza njani iComb Over
9Uyicelaphi indlela yokudibanisa iinwele
9.1Yintoni ekufuneka uyixelele i-Barber yakho
10Eyona ndawo ingcono yokuLungisa iiNwele zamadoda
10.1Ukudibanisa kunye neNxalenye eNzima
10.2Ukudibanisa ngaphezulu kunye namacala achetyiweyo
10.3Ukuphela okuphezulu + kweKama ngaphezulu
10.4Slick Comb Over Fade + Spiky Fringe + Inxalenye Enzima
10.5Ikama Ngaphezulu + Ukuphela okuphantsi
10.6Ikhefu elifutshane ngaphaya kokuPhela + kweCandelo
10.7Iinwele ezinde eziKhawulezayo ziFiphele
10.8Iindevu + zeKama ngaphezulu
10.9I-Wavy Kama ngaphezulu + kweFade esezantsi + Icandelo
10.10Ikama Ngaphezulu + koCingo oluPhelayo
10.11Ikama Ngaphezulu kweQuiff + yokuPhela kweBald ephezulu + kuyilo oluhle lweendevu
10.12Ikama enkulu yokuDlula + phakathi kweFade + iindevu ezinde
10.13Dibanisa ngaphaya kweenwele ezinde
10.14I-Mid Fade + Icandelo + leCombover
Yintoni indibaniselwano yokucheba iinwele?
Ikama elingaphezulu linobuchwephesha obungenasiphelo. Iinwele zinokudityaniswa kunye nokuphela okanye ukusika emacaleni, kunye neenwele ezinde ezingaphezulu zihlukaniswe ecaleni. I-undercut kunye ne-high fade comb ngaphezulu ziinguqulelo eziphakamileyo ezinomdla kakhulu ukunxiba iihipsters. Nangona kunjalo, ngenkangeleko enokuthi ibe yeyobuchwephesha ngakumbi kwishishini, unokuzama ikama elisezantsi lokuphelisa ngaphezulu.
Ngokubhekisele kwizinwele ngaphezulu, ukuba ukhetha ukugcina ubude, unokugxininisa umgca wecandelo elinzima kwaye udibanise iinwele zakho zonke kwelinye icala.
Abafana banokudibanisa ivolumu okanye i-spikes, kwaye awuthintelwanga kubude beenwele zakho kuba amadoda anokukhetha phakathi kwekama elide okanye elifutshane ngaphezulu. Ngapha koko, naphina ukusuka kwii-intshi ezi-2 ukuya kwezi-5 zeenwele ziya kusebenza kule nkangeleko.
Ekugqibeleni, eyona nto siyithandayo siyikama ngaphezu kokuphela - phezulu, phantsi, ulusu okanye iteyiphu. Nokuba yeyiphi na ikama yokucheba iinwele oyikhethileyo iyakukhangeleka intle, njengoko iinwele zithomalalisa i-asymmetry kunye nokukwazi ukuxhasa ubume beenwele zakho zendalo.
OwonaMdibaniso wamadoda uQhelekileyo weenwele
Ngeentlobo ezininzi zekama ngaphezulu kweenwele zokucela, kubalulekile ukuba abafana baqonde umahluko ocashileyo phakathi kwabo. Kwangokunjalo, ukudideka kwekama lanamhlanje ngaphezulu kwamadoda kuthetha ukuba abafana banokuzenza naziphi na kwezi zinto. Nokuba ufumana icandelo elinzima, ulayini, amacala achetyiweyo, okanye ukhulisa iindevu, oku kusikwa okumangalisayo kunye nesitayile kunokulungiselela nayiphi na inkangeleko oyifunayo.
Inkqubo ye- Ikama liphele idibanisa ukubukeka okucociweyo kwicala lakudala kunye neenwele ezimfutshane kakhulu emacaleni. Inkqubo ye- ukubuna kubandakanya ukuthambisa iinwele ziye entanyeni, ukuze iinwele zakho ziye ngokuthe ngcembe zibe mfutshane ezantsi emacaleni nasemva kwakho. Obu buchule budala imbonakalo entsha, enomahluko omkhulu, ngakumbi xa idityaniswe nenwele egudileyo nengapheliyo.
Kwikama eliphelayo ngaphezulu, amacala asikwa amafutshane kwaye aphela kude neenwele ezinde eziphezulu entloko. Oku kudala umahluko phakathi kwezinto ezimbini zokwakheka, ukubonakala okungathandabuzekiyo okuqinisekileyo kuya kuyonwabisa.
OkuPhezulu okuPhezulu kunye nokuPhela okuPhezulu ngaphezulu
Ukuphela kweenwele kuvumela abafana ukuba balungelelanise ukusikwa ukuze kulungele isitayile sabo. Umzekelo, ukuphela okuphezulu kukujongeka okugabadeleyo kwaye okunesibindi, ngelixa isithunzi esisezantsi sicacile kwaye senzeka kuphela kwimiphetho yentamo yakho neendlebe. Kwinto ethile embindini, ukuphela okuphakathi kuhlala kuyinto onokukhetha kuyo.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba zininzi iintlobo ezahlukeneyo zokuphela. Amadoda anokucela umchebi wawo ukuba a ulusu okanye i-bald fade edibanisa ngqo eluswini, okanye kwincakuba ephela enamacala achetyiweyo. Kulo nyaka, inani labafana bakhetha ikama ngaphezulu ngamacala achetyiweyo kweenwele ezimfutshane zokugqibela, iinwele ezinde eziphezulu.
Nangona kunjalo, ukuba ungusomashishini ofuna ukukhangeleka ucocekile emsebenzini, ikama eliphakathi okanye eliphantsi phezu kokuphela kunokuba sisimbo esifanelekileyo, ngelixa abo bafuna iinwele ezithandekayo ngakumbi banokukhetha ikama ephezulu kunokuba iphele.
Nokuba ukwahluka kukushiya nobude obaneleyo bokuthambisa iinwele phezu kwentloko yakho, kwaye ubuchule bokuphela budityaniswa ngaphandle komthungo kunye nekama elifutshane elingenasiphelo ngaphezulu.
I-Undercut Comb ngaphezulu
Ikhekhe engaphantsi kokudityaniswa kolunye uluvo lwangoku lweenwele zamadoda. Ngokudibanisa ikama ngaphezulu kokucheba iinwele kunye ne-undercut, amacala anqunyulwe amafutshane kakhulu kwaye bonke ubude bunye basebenzisa ii-clippers, ngelixa iinwele ngaphezulu kwentloko zishiywe zinde. Ngenye indlela, abafana banokwenza ukuba i-barber yabo ichebe umva kunye namacala abo ukuze basikwe ngokusondeleyo.
Umahluko phakathi kwamacala amafutshane kunye neenwele ezinde ngaphezulu zenza isitayile sihambelane kwaye sinomdla, ngelixa i-hairstyle idityaniswe kwelinye icala kwi-classic iteration yekama ngaphezulu. Ngolu hlobo lwekama ngaphezulu, icandelo lihlala lisenzeka kumda we-undercut.
Ngokufanayo, umchebi weenwele unokuhlala achebe indawo enzima eshinyeneyo entlonzeni yakho. Oku kunokwenza icandelo elicacisiweyo ngakumbi, kodwa iinwele zisabonakala njengekama ngaphezulu.
Ikhefu elifutshane ngaphezulu
Ukulungelelanisa, ukutshintsha okulula kwikama ngaphezulu, ukukhetha ukunqunyulwa okufutshane kukukhetha okuhle. Amadoda ayayithanda ikama emfutshane kuba iyakhawuleza isimbo kusasa kodwa isabonisa imbonakalo yehipster. Ngokufana neklasikhi engaphezulu, utshintsho phakathi komphezulu kunye namacala alubonakalisi okanye lugqithisile njengakwezinye iiyantlukwano.
Uninzi lweenwele entlokweni yakho ziya kunqunyulwa zijikeleze ii-intshi ezi-2 ubude, ezinye zithambe kancinci ngasemva nasemacaleni entloko. Uncedo lobude obufutshane kuthetha ukuba ungazitshintsha iinwele zakho zibe sisiphithiphithi, isityalo esilungisiweyo okanye iqela labasebenzi elisikiweyo.
Ikama ixesha elide
Ikama elide leenwele ngaphezulu liyaqhubeka nesiko lamacala amafutshane nangasemva ngophelileyo okanye ngokungaphantsi, kodwa ligcina iinwele kubude obuphakathi okanye obude ngaphezulu. Ikama elide phezu kwekhanda lisebenza kakuhle kumadoda aneenwele ezishinyeneyo, ezijijekileyo, okanye ezinenwele. Kwaye, ubude obungaphezulu ngaphezulu buvumela abafana ukuba benze isitayile senani lokunye ukubonakala kwesitayile, kubandakanya ne-quiff, pompadour, ye ifeksi .
Ekugqibeleni, le nwele yeenwele ezinde ilungele ukubonisa ubume bendalo beenwele zakho. Naphina ngaphezulu kwee-intshi ezi-4 ngaphezulu kunokufakwa isitayile kwikama elide ngaphezulu, kwaye ukubumba okanye ukwakheka kuya kufuna i umgangatho pomade okanye i-wax.
Ukuthambisa ikama kunye neenwele ezinde akunamsebenzi xa unemveliso elungileyo!
Ikhefu eliDala ngaphezulu
Ikama yeklasikhi ngaphezulu kwecandelo leenwele libonisa iinwele phezulu kunye namacala anobude obufanayo. Njenge ukuphola kweenwele ezimfutshane zamadoda , Uhlobo lweklasikhi lufuna ukusikwa okuthe tyaba emacaleni nasemva, kuhlala kufikelelwa kwisikere. Oku kugcina utshintsho phakathi kwamacala kunye nangaphezulu ngokuthe ngcembe, ngamacala asikwe ngesikere ajikeleze i-intshi ye-1.5 ubude ngokuthe chu ukuya entanyeni.
Uhlobo oluphezulu lukhangeleka njengendoda yokucheba iinwele ukusuka kwi-50s, exuding sophistication kunye neklasi. Ukucela le nwele, vele uxelele i-barber yakho ukuba ufuna ikama yeklasikhi ngaphezulu kwesitayile.
Uyenza njani indlela yokuChwetheza ukudibanisa ngaphezulu
Ukuthambisa ikama ngaphezulu kulula. Ngokungafaniyo nezinye iinwele, ezifana ne-quiff kunye ne-pompadour, efuna ixesha kunye nomzamo, ikama ngaphezulu kwezitayile inokufezekiswa kwimizuzu emi-5. Kungenxa yokuba icandelo elisecaleni lekama ngaphezulu lifuna ukuziqhelanisa nokufunda isitayile sendlela ngokufanelekileyo.
Yonke into oyifunayo ukuqala yimveliso yeenwele ozithandayo-nokuba yipomade, i-wax yeenwele, okanye i-putty ixhomekeke kuwe-kunye nekama. Sebenzisa ikama yamazinyo entle ukulawula ubuninzi ukuba uneenwele ezincinci, kodwa abo baneenwele ezishinyeneyo kungcono basebenzise ibrashi okanye ikama eliphakathi. Le miyalelo iyaphulele inkqubo kwaye ufumane ikama yakho ejonge ekucocekileyo kwaye intle.
Uyenza njani iComb Over
Ukwahlula iinwele zakho kunye nokwenza ikama ngaphezulu, landela la manyathelo alula.
Qala ngokufaka imveliso yokuthambisa iinwele. Ukuba usebenzisa i-pomade okanye i-wax, gcoba phakathi kwezandla zakho ukufudumeza ngaphambi kokusebenzisa.
Hambisa imveliso ngokulinganayo ngokuqhuba iminwe yakho ngeenwele zakho. Kwikama elicocekileyo ngaphezulu, ungazidibanisi iinwele zakho kakhulu njengoko uzokufuna ukuba zihlale zithe tyaba kwisitayile sokugqibela. Ngaphandle koko, kwikama enkulu ngaphezulu kwevolumu, zive ukhululekile ukuphakamisa njengoko usasaza imveliso kuyo yonke.
Hlanganisa iinwele zakho phambili kwaye ukhethe umgca wecandelo. Kungcono ukuba icandelo lakho apho iinwele zakho ziwela khona ngokwendalo, njengoko oku kuyakwenza ukuba isitayile sibonakale ngcono. Hlanganisa iinwele zakho kude nomgca, uzityhalele ecaleni kwentloko yakho.
Dibanisa imveliso ngela candelo leenwele, uqondise ikama ngqo ecaleni.
Ukujonga okwahlukileyo, dibanisa ubuyile endaweni endaweni ethe ngqo ecaleni. Bhrasha umphambili weenwele zakho ukuba ungathanda ukongeza ivolumu kwizinwele. Inkangeleko emdaka inokwenziwa ngokwahlulahlula kamnandi imicu yeenwele ngeminwe yakho, kodwa uninzi lwamadoda lukhetha ukubukeka okuthe tye.
Khumbula, ukuhombisa icala elisecaleni kunokufuna ukuziqhelisa ekuqaleni, kodwa ngobuchule obufanelekileyo kunye nemveliso yeenwele, abaqalayo banokwenza ikama ngaphezulu kunye nezitayile.
Uyicelaphi indlela yokudibanisa iinwele
Bonke abachebi abalungileyo bayayazi indlela yokusika ikama ngaphezulu kokucheba iinwele. Nangona kunjalo, ikama ngaphezulu luluhlu olubanzi lweenwele zamadoda, kwaye ngokulula ukucela ikama ngaphezulu akuboneleli ngeenkcukacha ezaneleyo zokufumana ukusika okufunayo. Ngokuthe ngqo ungaba malunga nohlobo lwekama ngaphezulu kwendlela oyifunayo kunye nendlela ofuna ukuyenza ngayo, kokukhona iinwele zokugqibela ziya kujongeka.
Ukuthatha isigqibo kwizinto ezimbalwa ngaphambi kokuba ufike kwindawo yokucheba iinwele kuya kuqinisekisa ukuba imiyalelo yakho icacile kwaye iinwele ozifumanayo ziyile nto uyifunayo.
Yintoni ekufuneka uyixelele i-Barber yakho
Okokuqala, ungaqala ngokuxelela umchebi wakho ongathanda ukwahlula iinwele zakho ecaleni. Umgca wecandelo lelona candelo liphambili lekama ngaphezulu kweenwele. Gqiba apho ufuna ukwahlula khona iinwele zakho nokuba uyafuna na ukuba ube ngumchebi wakho wokwenza icandelo elinzima.
Emva koko, thatha isigqibo sokuba ufuna ukuphela okanye ungaphantsi kumacala. Ungacela ikama ukuba iphele kwaye emva koko uthathe isigqibo sokuba iphakame kangakanani okanye iphantsi kangakanani iphela. Iinwele eziye zatshona eluswini, ekwabizwa ngokuba yi-bald fade, zinokunika umahluko omkhulu kwinkangeleko entle. Kodwa zikho ezinye iintlobo zokuphela Ukuqwalaselwa ngokunjalo.
Emva koko, kuyakufuneka uxelele umchebi wakho ukuba kufuneka ubude okanye bufutshane kangakanani na iinwele ezingaphezulu. Cinga ngendlela ofuna ukubeka ngayo isitayile ngaphezulu. Ukuba ufuna ukongeza ivolumu ngaphambili kunqunyiwe, i-barber yakho kufuneka ishiye ubude obaneleyo bokwenza njalo. Kwelinye icala, ukuba ufuna ukuchitha ixesha elincinci kwisitayile, ukuya kwinkangeleko emfutshane kuya kusebenza kakuhle kukhetho lwakho.
Okokugqibela, zive ukhululekile ukucela ingcebiso kuwe. Njengeengcali zeenwele zamadoda, banokukuxelela into eza kusebenza kwaye ijongeke kakuhle kuhlobo lwakho lweenwele kunye nesitayile.
Eyona ndawo ingcono yokuLungisa iiNwele zamadoda
Ikama ngaphezulu kukucheba kwamadoda ngeendlela ezininzi. Unokukhetha phakathi kwamacala amade okanye amafutshane, aphelileyo okanye athambileyo, kwaye wahlule iinwele zakho naphina apho ucinga ukuba zezona zibalaseleyo. Olona phawu lubalaseleyo kwikama ngaphezulu kwezitayile kukuba, nangona ukubonakala kweklasikhi kungengawo wonke umntu, unokufumana iinguqulelo zanamhlanje zokusikwa kwaye uzilungelelanise kuhlobo lweenwele zakho kunye nobude. Ukufumana ezinye izimvo, jonga ezinye iindlela zokunxiba ikama yakho kunwelevu.
Ukudibanisa ngaphezulu kunye namacala achetyiweyo
Ukuphela okuphezulu + kweKama ngaphezulu
Slick Comb Over Fade + Spiky Fringe + Inxalenye Enzima
Ikama Ngaphezulu + Ukuphela okuphantsi
Ikhefu elifutshane ngaphaya kokuPhela + kweCandelo
Iindevu + zeKama ngaphezulu
I-Wavy Kama ngaphezulu + kweFade esezantsi + Icandelo
Ikama Ngaphezulu + koCingo oluPhelayo
Ikama Ngaphezulu kweQuiff + yokuPhela kweBald ephezulu + kuyilo oluhle lweendevu
Ikama enkulu yokuDlula + phakathi kweFade + iindevu ezinde
Dibanisa ngaphaya kweenwele ezinde
I-Mid Fade + Icandelo + leCombover
Iimbono zemikhono yeetattoos
ukuvumisa ngeenkwenkwezi ezintathu ezinkulu